Spotify အကောင့်ကို မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာ ဘယ်လိုဖွင့်သုံးမလဲ?
Spotify အကောင့် လွယ်လွယ်ဖွင့်ကြမယ်
19 Apr 2018 . 4:27 PM
Spotify အကောင့် ဘယ်လိုဖွင့်မလဲ ?
သင်ဟာ နိုင်ငံခြား သီချင်းသံစဉ်တွေကိုကြိုက်နှစ်သက်သူတစ်ဦးဆိုရင် Spotify ကိုမဖြစ်မနေသုံးကြည့်ဖို့အရင်ဆုံးတိုက်တွန်းပါရစေ။ (သုံးရင်လည်းသုံးနှင့်နေလောက်ပါပြီ xD)
Spotify ဆိုတာကတော့ Online Music Streaming Service တစ်ခုပါ။ ကမ္ဘာတဝှမ်းမှာရှိတဲ့ အဆိုတော်အသီးသီးရဲ့ သီချင်းတွေကို Online ကနေတဆင့် ရှာဖွေနားထောင်လို့ရပါတယ်။ အကောင်းဆုံးနာမည်ကြီးနေတဲ့သီချင်းတွေ သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို မတူညီတဲ့ ဂီတသံစဉ်အမျိုးမျိုးနဲ့ ပုံဖော်ထားတာတွေကို နားထောင်နိုင်ပါတယ်။(ဒီလောက်ကောင်းတဲ့ Spotify ကိုအစောကြီးကတည်းက နားထောင်ခဲ့သင့်တယ်နော်) ဒါပေမယ့် Spotify ကိုနားထောင်ဖို့အတွက် ပြဿတစ်ခုကရှိနေခဲ့ပါတယ်။ အဲ့တာကတော့ Spotify ကိုနားထောင်ဖို့အတွက် အကောင့်လိုအပ်မှာဖြစ်ပြီး App မှာပါဝင်တဲ့အဆင့်အလိုက် အကောင့်ဖွင့်ပေမယ့် No Intenret Connection လို့ပြပြီး ဘာမှဆက်လုပ်လို့မရတာပါပဲ။ ဒါဟာ နိုင်ငံအလိုက် Location တွေ ကန့်သတ်ထားတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ အင်တာနက် လိုင်းမကောင်းလို့မဟုတ်ပါဘူး။ ခုလိုဘာကြောင့်လုပ်ရတာလဲလို့ ရှာကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ လက်ခံနိုင်လောက်တဲ့ အောက်ပါ အကြောင်းအရာလေးတွေကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။
(၁) နိုင်ငံတိုင်းမှာရှိတဲ့ သီချင်းပိုင်ရှင်၊ အဆိုရှင်တွေနဲ့ မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာညှိနှိုင်းချက်တွေ အဆင်မပြေသေးတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
(၂) User အများစုဟာ Paid Version တွေကိုအသုံးမပြုတော့ပဲ Free အနေနဲ့သာသုံးစွဲနေတဲ့အတွက်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အချို့သော User တွေဟာ Start up တွေကိုတောင်သေသေချာချာမပြင်ဆင်ပဲ ဒီအတိုင်းပစ်ထားကြပါတယ်။
(၃) နိုင်ငံတိုင်းကိုပေးသုံးပေမယ့် ၄င်းတို့အတွက် အကျိုးအမြတ်မရရှိခြင်း
စတဲ့အချက်တွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင် အချို့နိုင်ငံအတော်များများမှာ အသုံးပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုဖြစ်နေရင်တော့ Location ခဏပြောင်းပြီးအကောင့်ဖွင့်ရင်ရပါတယ်။
အောက်မှာ ဖော်ပြမယ့်နည်းလမ်းတွေကတော့ VPN ကိုအသုံးပြုပြီး Location ပြောင်းကာ Spotify အကောင့် ဖွင့်နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကဲ စလိုက်ရအောင်..
ပထမဦးဆုံးလိုအပ်မယ့် App တွေကို Download ပြုလုပ်ပါ။
-Download ဆွဲပြီးလို့ Install လုပ်ပြီးသွားရင်တော့ Turbo VPN ကိုဖွင့်ပါ။ ပုံမှာပြ
ထားတဲ့အတိုင်း US Server ကိုရွေးပြီးချိတ်ပေးပါ။
-Notification Bar လေးမှာ သော့ပုံလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ VPN ချိတ်ဆက်မှု
လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးပါပြီ။ Home Key နဲ့ထွက်ပြီး Spotify ထဲကိုဝင်ပါ။ အကောင့်သစ်
ဖွင့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် Sign Up Free ကိုနှိပ်ပါ။
-Email နဲ့ အသုံးပြုမယ့် Password အသစ်ကိုရိုက်ထည့်ပါ။
-Next ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရင် ရပါပြီ။
VPN မချိတ်ခင်က ပေါ်နေတဲ့ No Internet Connection ဆိုတာကြီးပေါ်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ စိတ်ကြိုက်နားထောင်လို့ရပါပြီခင်ဗျာ။
Spotify အကောငျ့ ဘယျလိုဖှငျ့မလဲ ?
သငျဟာ နိုငျငံခွား သီခငျြးသံစဉျတှကေိုကွိုကျနှဈသကျသူတဈဦးဆိုရငျ Spotify ကိုမဖွဈမနသေုံးကွညျ့ဖို့အရငျဆုံးတိုကျတှနျးပါရစေ။ (သုံးရငျလညျးသုံးနှငျ့နလေောကျပါပွီ xD)
Spotify ဆိုတာကတော့ Online Music Streaming Service တဈခုပါ။ ကမ်ဘာတဝှမျးမှာရှိတဲ့ အဆိုတျောအသီးသီးရဲ့ သီခငျြးတှကေို Online ကနတေဆငျ့ ရှာဖှနေားထောငျလို့ရပါတယျ။ အကောငျးဆုံးနာမညျကွီးနတေဲ့သီခငျြးတှေ သီခငျြးတဈပုဒျကို မတူညီတဲ့ ဂီတသံစဉျအမြိုးမြိုးနဲ့ ပုံဖျောထားတာတှကေို နားထောငျနိုငျပါတယျ။(ဒီလောကျကောငျးတဲ့ Spotify ကိုအစောကွီးကတညျးက နားထောငျခဲ့သငျ့တယျနျော) ဒါပမေယျ့ Spotify ကိုနားထောငျဖို့အတှကျ ပွဿတဈခုကရှိနခေဲ့ပါတယျ။ အဲ့တာကတော့ Spotify ကိုနားထောငျဖို့အတှကျ အကောငျ့လိုအပျမှာဖွဈပွီး App မှာပါဝငျတဲ့အဆငျ့အလိုကျ အကောငျ့ဖှငျ့ပမေယျ့ No Intenret Connection လို့ပွပွီး ဘာမှဆကျလုပျလို့မရတာပါပဲ။ ဒါဟာ နိုငျငံအလိုကျ Location တှေ ကနျ့သတျထားတဲ့အတှကျဖွဈပါတယျ။ အငျတာနကျ လိုငျးမကောငျးလို့မဟုတျပါဘူး။ ခုလိုဘာကွောငျ့လုပျရတာလဲလို့ ရှာကွညျ့တဲ့အခါမှာတော့ လကျခံနိုငျလောကျတဲ့ အောကျပါ အကွောငျးအရာလေးတှကေိုတှရှေိ့ရပါတယျ။
(၁) နိုငျငံတိုငျးမှာရှိတဲ့ သီခငျြးပိုငျရှငျ၊ အဆိုရှငျတှနေဲ့ မူပိုငျခှငျ့ဆိုငျရာညှိနှိုငျးခကျြတှေ အဆငျမပွသေေးတာကွောငျ့ဖွဈပါတယျ။
(၂) User အမြားစုဟာ Paid Version တှကေိုအသုံးမပွုတော့ပဲ Free အနနေဲ့သာသုံးစှဲနတေဲ့အတှကျလညျးဖွဈနိုငျပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ အခြို့သော User တှဟော Start up တှကေိုတောငျသသေခြောခြာမပွငျဆငျပဲ ဒီအတိုငျးပဈထားကွပါတယျ။
(၃) နိုငျငံတိုငျးကိုပေးသုံးပမေယျ့ ၎င်းငျးတို့အတှကျ အကြိုးအမွတျမရရှိခွငျး
စတဲ့အခကျြတှကွေောငျ့မွနျမာနိုငျငံအပါအဝငျ အခြို့နိုငျငံအတျောမြားမြားမှာ အသုံးပွုနိုငျခွငျးမရှိသေးတာဖွဈပါတယျ။
ဒီလိုဖွဈနရေငျတော့ Location ခဏပွောငျးပွီးအကောငျ့ဖှငျ့ရငျရပါတယျ။
အောကျမှာ ဖျောပွမယျ့နညျးလမျးတှကေတော့ VPN ကိုအသုံးပွုပွီး Location ပွောငျးကာ Spotify အကောငျ့ ဖှငျ့နညျးပဲဖွဈပါတယျ။ ကဲ စလိုကျရအောငျ..
ပထမဦးဆုံးလိုအပျမယျ့ App တှကေို Download ပွုလုပျပါ။
-Download ဆှဲပွီးလို့ Install လုပျပွီးသှားရငျတော့ Turbo VPN ကိုဖှငျ့ပါ။ ပုံမှာပွ
ထားတဲ့အတိုငျး US Server ကိုရှေးပွီးခြိတျပေးပါ။
-Notification Bar လေးမှာ သော့ပုံလေးပျေါလာပွီဆိုရငျတော့ VPN ခြိတျဆကျမှု
လုပျငနျးစဉျပွီးဆုံးပါပွီ။ Home Key နဲ့ထှကျပွီး Spotify ထဲကိုဝငျပါ။ အကောငျ့သဈ
ဖှငျ့မှာဖွဈတဲ့အတှကျ Sign Up Free ကိုနှိပျပါ။
-Email နဲ့ အသုံးပွုမယျ့ Password အသဈကိုရိုကျထညျ့ပါ။
-Next ကိုနှိပျပေးလိုကျရငျ ရပါပွီ။
VPN မခြိတျခငျက ပျေါနတေဲ့ No Internet Connection ဆိုတာကွီးပျေါတော့မှာမဟုတျပါဘူး။ စိတျကွိုကျနားထောငျလို့ရပါပွီခငျဗြာ။